NY World Trade Center Subway Station dia fampahatsiahivana momba ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » NY World Trade Center Subway Station dia fampahatsiahivana momba ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona
Septambra 9, 2018
World Trade Center Cortlandt Street no mahasarika mpizahatany any New York ao Manhattan. Nosokafana tany New York Manhattan ny asabotsy 1 ny sabotsy. Tsy fampahatsiahivana fotsiny ho an'ny mpizahatany izany, fa vao mainka ny an'ny olona ao New York, ny Zon'olombelona ary ny fangatahana ny governemanta hanaja izany zo izany.
Sambany hatramin'ny marain'ny 11 septambra 2001, fiaran-dalamby 1 no mijanona eto amin'ny Cortlandt St any Manhattan. Nisokatra tamin'ny mitataovovonana androany ilay fiantsonana, antsoina ankehitriny hoe "WTC Cortlandt".
Naharitra 17 taona ny fotoana, fa nisokatra ihany ny gara 1 an'ny Cortlandt Street. Betsaka ny vaovao ao amin'ny gara - ao anatin'izany ny anarana. Nahazo fijery manokana tao anatiny i Andrew Siff.
Nipoaka ny fihobiana rehefa nivily ho any amin'ny gara vaovao WTC Cortlandt ny sabotsy tolakandro.
Ny tobin'ny Cortlandt Street taloha teo amin'ny tsipika faha-1 an'ny rafitra metro dia nalevina tao ambanin'ny korontam-baravaran'ireo tilikambo kambana tamin'ny 11 septambra 2001. Nahemotra ny fananganana ilay gara vaovao mandra-pivoaran'ny fanamboarana ireo tilikambo manodidina.
Mitentina 181 tapitrisa dolara ny gara vaovao ary misy mozika mosaic izay mampiasa teny avy amin'ny Fanambarana ny fahaleovan-tena.
Ny fanenomana dia tandindona ao ambadiky ny tetikasa zavakanto $ 1 tapitrisa noforonina ho an'ny Stasion Cortlandt Street nataon'i Ann Hamilton, izay nofinidin'ny fandaharana momba ny Zavakanto sy ny Famolavolana Metropolitan. Ramatoa Hamilton, 58 taona, mpampianatra zavakanto ao amin'ny Oniversiten'i Ohio State any Columbus, dia namorona fametrahana haino aman-jery marobe.
Ny fototry ny teny mameno ny gara New York Subway dia fampatsiahivana ara-potoana ny zon'olombelona ary nalaina avy amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona.
Toy izao ny fanambarana:
Raha ny fanekena ny fahamendrehana voajanahariny sy ny zony mitovy sy tsy azo zakan'ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakavian'olombelona dia fototry ny fahalalahana, ny fahamarinana ary ny fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao,
Raha ny tsy fanajana sy ny fanaovana tsinontsinona ny zon'olombelona dia niteraka fihetsika baranahady izay nahasosotra ny feon'ny fieritreretan'olombelona, ​​ary ny fahatongavan'ity tontolo iray izay hananan'ny olombelona fahalalahana miteny sy finoana ary fahalalahana amin'ny tahotra sy ny filàna dia nambara ho faniriana avo indrindra ny sarambabem-bahoaka,
Ilaina tokoa izany, raha tsy terena ny olona hitady vahaolana farany, amin'ny fikomiana farany amin'ny fikomiana amin'ny famoretana sy ny famoretana, dia tokony harovan'ny lalàna ny zon'olombelona,
Raha ilaina ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ny fifandraisana amam-pirahalahiana eo amin'ny firenena,
Raha ny vahoaka ao amin'ny Firenena Mikambana dia nanamafy ny finoany ny zon'olombelona fototra, ny fahamendrehana sy ny lanjan'ny olombelona ary ny zon'ny lehilahy sy ny vehivavy ary tapa-kevitra ny hampiroborobo ny fandrosoana ara-tsosialy sy ny fari-piainana tsaratsara kokoa amin'ny fiainana. fahalalahana lehibe kokoa,
Raha ny firenena mpikambana dia nivoady ny tenany hahatratra, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Firenena Mikambana, ny fampiroboroboana ny fanajana sy ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fahalalahana ifotony,
Raha ny fahalalana iraisana momba ireo zony sy fahalalahana ireo no zava-dehibe indrindra amin'ny fanatanterahana tanteraka izany fampanantenanao izany,
Ankehitriny, noho izany NY FIVORIAMBE GENERAL dia manambara IZAO FANAMBARANA AN'IZAO REHETRA NY ZON'OLOMBELONA ho fari-piainana iraisan'ny besinimaro amin'ny firenena rehetra, mba hiezahan'ny tsirairay sy ny rafi-piaraha-monina rehetra, mitandrina ao an-tsaina ity Fanambarana ity, amin'ny fampianarana sy fanabeazana hampiroborobo ny fanajana ireo zony sy fahalalahana ireo ary amin'ny alàlan'ny fepetra mandroso, nasionaly sy iraisam-pirenena, hahazoana antoka ny fankatoavana sy ny fanajana azy ireo manerantany, na eo amin'ireo vahoaka mpikambana ao amin'ny Fanjakana mpikambana na eo amin'ireo vahoaka faritany eo ambany fiadidiany.
Ny olombelona rehetra dia teraka afaka ary mitovy ny fahamendrehana sy ny zony. Nomena saina sy fieritreretana izy ireo ary tokony hifaneho amin'ny toe-tsaina mpirahalahy.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana ny zony sy ny fahalalahana rehetra voalaza ao amin'ity Fanambarana ity, tsy misy fanavahana karazana, toy ny firazanana, ny volon-koditra, ny lahy na ny vavy, ny fiteny, ny fivavahana, ny hevitra politika na hafa, fiaviana ara-pirenena na ara-tsosialy, fananana, teraka na toerana hafa. Ankoatr'izay, tsy misy fanavahana azo apetraka amin'ny fototra ara-politika, ara-pitondrana na iraisam-pirenena an'ny firenena na faritany ananan'ny olona iray, na mahaleo tena, fitokisana, tsy mitantana irery na ambanin'ny fetran'ny fiandrianam-pirenena hafa.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fiainana, fahalalahana ary fiarovana ny ain'ny olona.
Tsy misy olona azo andevozina na andevoziny; ny fanompoana andevo sy ny varotra andevo dia voarara amin'ny endriny rehetra.
Tsy misy olona iharan'ny fampijaliana na amin'ny fampijaliana na fanararaotana, tsy maha-olombelona na manambany.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hekena amin'ny toerana rehetra amin'ny maha olona azy eo alohan'ny lalàna.
Mitovy daholo ny rehetra eo ambanin'ny lalàna ary manan-jo tsy misy fanavakavahana amin'ny fiarovana ny lalàna. Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fiarovana mitovy amin'ny fanavakavahana izay manitsakitsaka ity Fanambarana ity sy amin'ny fanentanana ny fanavakavahana toy izany.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hahazo fanasitranana mahomby ataon'ny tribonaly nasionaly mahay noho ny fihetsika manitsakitsaka ny zo fototra omen'ny lalàm-panorenana na ny lalàna.
Tsy misy olona iharan'ny fisamborana na fanagadrana na fanaovana sesitany azy ireo.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hitovy amin'ny fitsarana ara-drariny sy ampahibemaso ataon'ny tribonaly tsy miankina sy tsy mizaha tavan'olona amin'ny famaritana ny zony sy ny adidiny ary izay fiampangana heloka bevava atao aminy.
(1) Izay rehetra voampanga ho nanao heloka bevava dia manana zo holazaina fa tsy manan-tsiny mandra-pahatongan'ny fanamelohana azy araka ny lalàna tamin'ny fitsaram-bahoaka izay ananany ny antoka rehetra ilaina amin'ny fiarovana azy.
(2) Tsy misy olona meloka amin'ny heloka bevava rehetra noho ny fihetsika na fihemorana izay tsy nahitana heloka, araka ny lalàna nasionaly na iraisam-pirenena, tamin'ny fotoana nanaovana izany. Ary tsy tokony hosazina ny sazy mavesatra noho ny sazy mihatra amin'ny fotoana nanaovana ny fanamelohana.
Tsy misy olona iharan'ny fitsabahan'ny tsy miankina amin'ny fiainany manokana, ny fianakaviany, ny tranony na ny taratasiny, na ny fanafihana ny voninahiny sy ny lazany. Zon'ny tsirairay ny fiarovana ny lalàna amin'ny fitsabahana na fanafihana toy izany.
(1) Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fahalalahana mihetsika sy honina ao anatin'ny faritry ny fanjakana tsirairay.
(2) Manan-jo handao ny firenena rehetra, ao anatin'izany ny azy ny tsirairay ary hiverina any amin'ny fireneny.
(1) Zon'ny tsirairay ny mitady sy mankafy fialokalofana any amin'ny firenen-kafa noho ny fanenjehana.
(2) Ity zon'olombelona ity dia tsy azo ampiasaina amin'ny raharaham-pitsarana marina izay avy amin'ny heloka bevava tsy ara-politika na amin'ny fihetsika mifanohitra amin'ny tanjona sy fitsipiky ny Firenena Mikambana.
(1) Zon'ny tsirairay ny zom-pirenena.
(2) Tsy misy olona esorina tsy ara-dalàna amin'ny zom-pireneny ary tsy holavina ny zom-pireneny.
(1) Ny lehilahy sy ny vehivavy feno taona, tsy misy fetra noho ny firazanana, ny zom-pirenena na ny fivavahana, dia manan-jo hanambady sy hanana fianakaviana. Izy ireo dia manan-jo hitovy amin'ny fanambadiana, mandritra ny fanambadiana ary amin'ny fandravana azy.
(2) Ny fanambadiana ihany no hanaovana fanekena amin'ny alàlan'ny fanekena malalaka sy feno ataon'ireo vady kasaina.
(3) Ny fianakaviana dia vondrona vondrona voajanahary sy ifotony ao amin'ny fiarahamonina ary manan-jo hiaro ny fiaraha-monina sy ny Fanjakana.
(1) Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fananana samirery ary koa miaraka amin'ny hafa.
(2) Tsy misy olona ho alaina tsy ara-dalàna amin'ny fananany.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fahalalahana hanana eritreritra, feon'ny fieritreretana ary fivavahana; ity zony ity dia misy ny fahalalahana hanova ny fivavahany na ny finoany, ary ny fahalalahana, na irery na eo amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny hafa sy amin'ny besinimaro na amin'ny tsy miankina, hanehoana ny fivavahany na ny finoana amin'ny fampianarana, fampiharana, fanompoana ary fitandremana.
Manan-jo hanana fahalalahana maneho hevitra sy maneho hevitra ny tsirairay; ity zony ity dia misy ny fahalalahana mitazona hevitra tsy misy fitsabatsabahana ary mitady, mandray ary mizara vaovao sy hevitra amin'ny alàlan'ny haino aman-jery rehetra ary na inona na inona sisintany.
(1) Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fahalalahana hivory amina fiarahamonina am-pilaminana.
(2) Tsy misy olona azo terena hiditra ao amin'ny fikambanana.
(1) Ny olona tsirairay dia manan-jo handray anjara amin'ny governemanta ao amin'ny fireneny, na amin'ny alàlan'ny solontena voafidy malalaka.
(2) Ny olon-drehetra dia manana zon'ny fidirana mitovy amin'ny serivisy ho an'ny daholobe ao amin'ny fireneny.
(3) Ny safidim-bahoaka no fototry ny fahefan'ny governemanta; izany dia holazaina amin'ny fifidianana maharitra sy maharitra izay amin'ny alàlan'ny fifidianana ekena sy eken'ny rehetra ary hotanterahina amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina na amin'ny fomba mifidy malalaka mifidy.
Ny olona rehetra, amin'ny maha mpikambana azy eo amin'ny fiarahamonina, dia manan-jo hanana fiarovana ara-tsosialy ary manan-draharaha amin'ny fanatanterahana, amin'ny alàlan'ny ezaka nasionaly sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ary mifanaraka amin'ny fandaminana sy ny loharanon-karena an'ny Fanjakana tsirairay, ny zon'antoka ara-toekarena, sosialy ary kolontsaina ilaina amin'ny ny fahamendrehany ary ny fivelarana malalaka ny toetrany.
(1) Ny olon-drehetra dia manan-jo hiasa, hanana safidy malalaka amin'ny asa, hanana fepetra ara-drariny sy tsara ary hiarovana amin'ny tsy fananan'asa.
(2) Ny olon-drehetra, tsy misy fanavakavahana, dia manan-jo handoa onitra mitovy amin'ny asa mitovy.
(3) Izay miasa dia manan-jo handray karama ara-drariny sy tsara miantoka izay ilain'ny tenany sy ny fianakaviany fisiana mendrika ny hasina mahaolona ary ampiana, raha ilaina, amin'ny fomba hafa amin'ny fiarovana ara-tsosialy.
(4) Ny olona tsirairay dia manan-jo hamorona sy hanatevin-daharana ireo sendika mba hiarovana ny tombotsoany.
Zon'ny tsirairay ny miala sasatra sy miala sasatra, ao anatin'izany ny fetran'ny fetra miasa sy ny fialantsasatra tsindraindray miaraka amin'ny karama.
(1) Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fari-piainana sahaza ho an'ny fahasalaman'ny tenany sy ny ankohonany, ao anatin'izany ny sakafo, fitafiana, trano ary fitsaboana ary serivisy ilaina ara-tsosialy ary ny zon'ny fiarovana raha misy tsy fananan'asa, aretina, kilemaina, mpitondratena, fahanterana na tsy fananana fivelomana amin'ny toe-javatra tsy takatry ny sainy.
(2) Ny reny sy ny fahazazana dia mahazo fikarakarana manokana sy fanampiana manokana. Ny zaza rehetra, na teraka tao na tsy nanambady, dia hanana fiarovana ara-tsosialy mitovy.
(1) Ny olon-drehetra dia manan-jo hianatra. Malalaka ny fampianarana, farafaharatsiny amin'ny dingana ambaratonga fototra sy fototra. Tsy maintsy atao ny fanabeazana fototra. Ny fanabeazana ara-teknika sy matihanina dia hatao amin'ny ankapobeny ary ny fanabeazana avo lenta dia tokony ho azon'ny rehetra arakaraka ny fahamendrehana.
(2) Ny fanabeazana dia entina hampivoarana tanteraka ny toetran'ny olombelona sy ny fanamafisana ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana ifotony. Izy io dia tokony hampiroborobo ny fahatakarana, ny fandeferana ary ny fisakaizana eo amin'ny firenena rehetra, ny foko na ny antokom-pinoana ary hampandroso ny asan'ny Firenena Mikambana amin'ny fitandroana ny fandriampahalemana
(3) Ny ray aman-dreny dia manan-jo hisafidy ny karazana fanabeazana homena ny zanany.
(1) Zon'ny tsirairay ny mandray anjara malalaka amin'ny fiainana ara-kolontsaina eo amin'ny fiarahamonina, hankafy ny zavakanto ary hizara amin'ny fandrosoana ara-tsiansa sy ny tombony azo avy amin'izany.
(2) Ny olon-drehetra dia manan-jo hiaro ny tombotsoany ara-moraly sy ara-materialy vokatry ny famokarana siantifika, haisoratra na zava-kanto niavian'ny mpanoratra azy.
Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana lamina ara-tsosialy sy iraisam-pirenena izay ahafahana manatanteraka ny zo sy ny fahalalahana voalaza ao amin'ity Fanambarana ity.
(1) Ny tsirairay dia manana adidy amin'ny fiarahamonina izay ahafahana mampivelatra malalaka ny toetrany manokana.
(2) Amin'ny fampiharana ny zony sy ny fahalalahany, ny olona rehetra dia iharan'ny fameperana voafetra ihany, araka izay tapa-kevitry ny lalàna, fotsiny mba hananana fanekena sy fanajana ny zon'ny hafa sy ny fahalalahan'ny hafa ary ny fanatanterahana ireo fepetra takiana amin'ny fitsipi-pitondrantena. , filaminam-bahoaka ary ny fiahiana ankapobeny amin'ny fiarahamonina demokratika.
(3) Ireo zony sy fahalalahana ireo dia tsy azo ampiharina amin'ny fomba mifanohitra amin'ny tanjona sy fitsipiky ny Firenena Mikambana.
Tsy misy na inona na inona amin'ity Fanambarana ity azo adika ho midika ho an'ny Fanjakana, vondrona na olona misy zon'olombelona manao hetsika na manao asa izay mikendry ny fanimbana ny zon'ireo fahalalahana voalaza eto.